May Nyane: အလွမ်းသင့်.. နာ
မျောဝင်ပြီး သေသေချာချာ ခံစားသွားပါတယ် အစ်မရယ်။ အချစ်ဆိုတာကလည်း ….။
ခက်တာက အချစ်ဆိုတာ ဖန်တီးလို့ မှ မရတာပဲ မ ရယ်…
အချစ် ... အချစ်
နောက်ဆုံးတော့ ငါပဲ နစ်
စွဲလန်းမိတာ အပြစ် ။
အဲလိုရေးဖူးတာ သွားသတိရတယ် ။
အချစ်သည် ဘက် မညီသည့်အခါ ဝေဒနာများစွာကိုလည်း ပေးတတ်၏ ။
ငိုချင်လိုက်တာဗျာ :( တကယ်ကယ်တော့ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ ရင်မခုန်သင့်ဘူး ။ ခင်မင်မှု နှင့် ရင်ခုန်ချစ်ခင်မှုဆိုတာ မိန်းကလေးတွေအတွက် သီးခြားခံစားမှုထင်ပါရဲ့ ..
(ဟင့်အင်း... သူလား... ကျနော့်ကို မုန်းမှာ.. မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ကျနော့်ကို ဘယ်တော့မှ မုန်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့လား ချစ်... မှာ... လည်း... မဟုတ်... ဘူး။)
သည်စာသားလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ။ ကျေးဇူး ..
How long have you been written that post, Sayama? It's stillacomtemporary one for me. Anyway, I love your feather-like writing style.
အမရဲ့..အလွမ်းသင့်နာ ၀တ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြီး...၊ အမဆီိကို ဒီကဗျာလေးလှမ်းပို့ချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့....။
အမရဲ့ ဇာတ်လိုက် "စိုး" လိုလူတစ်ယောက်အတွက်ရေးထားတာလေ..၊ (အဟဲ........ချစ်သူနဲ့ကတော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့....)
ထပ်တူထပ်မျှ...ခံစားနားလည်ပေးနိုင်တာနဲ့ အချစ်ဆိုတာနဲ့ တခြားဆီနော်အမ..
ငါ့ကို ချိုးဖဲ့ ဖူးပွင့်ပါ.....
နင့် ဘ၀ကို မလေးလံစေဖို့...
ငါ့ သက်ပြင်းနဲ့ငါ... ဆင်းရဲတွင်းနက်ခဲ့....
နင့် ဘက် မှာ သောင် ထွန်း ပါ စေ သား..........။ ။
အိန္ဒြာ ( သြဂုတ်-2003 ၊ မြားနတ်မောင်)